Tag: Ahịa Twitter | Martech Zone
Tag: Ahịa Twitter
E nwere ọtụtụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya na teknụzụ teknụzụ nọ ebe ahụ na-ekwu maka ọnwụ Twitter. Aga m ekwu eziokwu na, agbanyeghị mkpọtụ azụmaahịa, m ka na-ahụkwa uru dị egwu n'elu ikpo okwu. Ọ bụrụ na onye si na Twitter na-agụ nke a, lee ihe m ga - eme ozugbo iji meziwanye nsonaazụ azụmaahịa: Mee ka ndị ọrụ kwụọ ụgwọ maka tweets akpaghị aka. Oh - enwere m ike ịnụ mkpu ahụ ugbu a, mana ọ bụrụ na ọ ga-ekwe ọnụ, aga m akwụ ụgwọ iji kwalite nke m
Steeti nke Social Media Marketing 2015
Satọde, Satọdee 26, 2015 Douglas Karr
Anyị kekọrịtare profaịlụ na ozi igwe mmadụ na nke ọ bụla na netwọkụ mmekọrịta ọha ama, mana nke ahụ anaghị enye ọtụtụ ozi gbasara mgbanwe omume na mmetụta nke mgbasa ozi mmekọrịta. Ekwentị, eCommerce, gosipụta mgbasa ozi, mmekọrịta ọha na eze yana ọbụlagodi azụmaahịa igwe injin na-emetụta site na mgbasa ozi mgbasa ozi mmekọrịta. Ihe bụ eziokwu bụ… ọ bụrụ na azụmahịa gị abụghị azụmaahịa na mgbasa ozi mmekọrịta, ị na-efu nnukwu ohere. N'ezie, 33% nke ndị ahịa kwuru na mgbasa ozi mmekọrịta dị ka a
Atụmatụ azụmahịa na Characters 140 ma ọ bụ Naa
Twitter eweghachila ụlọ ọrụ azụmahịa ha ma gbakwunye vidiyo ọhụrụ, mara mma. Enwere m mmasị na ozi na ihe osise, ọ na-ese onyinyo doro anya nke Twitter na otu azụmahịa nwere ike isi jiri ngwa ọrụ ahụ ozugbo, iji zaghachi ma kwalite azụmahịa ha. Ihe ndị dị mkpa gụnyere ijikọ ndị ziri ezi, chọpụta ihe ndị ọzọ dị na Twitter na otu esi erute ha, ghọta nsonaazụ gị site na nyocha, jikọta mbọ ahịa gị
Ka anyị na-amalite ileghachi anya azụ n'afọ gara aga, ekwenyere m na ọ dị mkpa ịnweta nkọwa doro anya nke usoro atụmatụ ịzụ ahịa na-eto… ma na ewu ewu na nsonaazụ. Ọ dịkwa mkpa ịmata usoro ndị nwere ndị ahịa na-agba agba gburugburu ma ọ bụghị na-ebute nsonaazụ ha na-achọ ma ọ bụ dị mkpa. Ndị na-ere ahịa azụmaahịa nke 2012 Backlinking - Otu n'ime okwu ndị na-ese okwu na ewu ewu na 2012 na-ekwupụta nke ahụ